01.02.21 Morning Nepali Murli Om Shanti BapDada Madhuban
“मीठे बच्चे– गरिब निवाज बाबाले तिमीलाई कौडीबाट हीरा जस्तो बनाउन आउनु भएको छ त्यसैले सदा उहाँको श्रीमतमा चल।”
सबैभन्दा पहिला तिमीले सबैलाई कुनचाहिँ एक गहन रहस्य सम्झाउनु पर्छ?
बाप-दादाको। तिमीले जानेका छौ– यहाँ हामी बापदादाको पासमा आएका छौं। उहाँहरू दुवै संयुक्त हुनुहुन्छ। शिवको आत्मा पनि यिनमा छ, अनि ब्रह्माको आत्मा पनि छ। एक आत्मा हो, दोस्रो परमात्मा। त्यसैले सबैभन्दा पहिला यो गहन रहस्य सबैलाई सम्झाऊ– यी बापदादा सँगसँगै हुनुहुन्छ। यी दादा भगवान होइनन्। मनुष्य भगवान हुँदैन। भगवान भनिन्छ निराकारलाई। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ शान्तिधामका निवासी।
बाबाले दादाद्वारा अर्थात् शिवबाबाले ब्रह्मा दादाद्वारा सम्झाउनु हुन्छ– यो निश्चय गर। लौकिक सम्बन्धमा बाबा भिन्नै, दादा भिन्नै हुन्छन्। पिताद्वारा हजुरबुबाको वर्सा मिल्छ। भन्छन्– हजुरबुबाको वर्सा लिन्छौं। बाबा हुनुहुन्छ गरिब निवाज। गरिब निवाज उहाँलाई भनिन्छ, जसले आएर गरिबलाई शिरताजधारी बनाउनु हुन्छ। त्यसैले सबैभन्दा पहिला पक्का निश्चय हुनुपर्छ– यहाँ को हुनुहुन्छ? देख्नमा त साकार मनुष्य देखिन्छ, यिनलाई यहाँ सबैले ब्रह्मा भन्छन्। तिमीहरू सबै ब्रह्माकुमार-ब्रह्माकुमारी हौ। जानेका छौ– हामीलाई वर्सा शिवबाबाद्वारा मिल्छ। जो सबैका बाबा आउनु भएको छ, वर्सा दिनको लागि। बाबाले वर्सा दिनुहुन्छ सुखको। फेरि आधाकल्प पछि रावणले दु:खको श्राप दिन्छ। भक्ति मार्गमा भगवानलाई खोज्नको लागि धक्का खान्छन्। प्राप्ति कसैलाई हुँदैन। हिन्दुहरूले गायन गर्छन्– तिमी माता-पिता.... फेरि भन्छन्– हजुर जब आउनु हुन्छ, हाम्रो एक हजुर नै हुनुहुन्छ, अरू कोही हुँदैन। अरू कसैसँग हामीले ममत्व राख्ने छैनौं। हाम्रो त एक शिवबाबा। तिमीले जानेका छौ– यहाँ बाबा हुनुहुन्छ गरिब निवाज। गरिबलाई धनवान बनाउनेवाला, कौडीलाई हीरातुल्य बनाउनु हुन्छ अर्थात् कलियुगी पतित कंगालबाट सत्ययुगी शिरताजधारी बनाउनको लागि बाबा आउनु भएको छ। तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ– यहाँ हामी बापदादाका पासमा आएका छौं। यहाँ दुवै सँगसँगै हुनुहुन्छ। शिवको आत्मा पनि यिनमा छ, ब्रह्माको आत्मा पनि छ, दुई भए नि। एक आत्मा छ, अर्का परमात्मा। तिमीहरू सबै आत्माहरू हौ। गायन गरिन्छ– आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल... पहिलो नम्बरमा मिलन मनाउनेवाला हौ तिमी आत्माहरू अर्थात् आत्माहरूले उहाँ परमात्मा बाबासँग मिलन मनाउँछन्, जसको लागि पुकार्छन् हे परमपिता परमात्मा। तिमी उहाँका बच्चा भयौ। पिताबाट अवश्य पनि वर्सा मिल्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– भारतखण्ड जुन शिरताज थियो, त्यो अहिले कति कंगाल बनेको छ। अहिले फेरि म तिमी बच्चाहरूलाई शिरताजधारी बनाउन आएको छु। तिमी डबल शिरताजधारी बन्छौ। एक ताज हुन्छ पवित्रताको, त्यसमा प्रकाश राखिदिन्छन्। अर्को हुन्छ रत्न जडित ताज। सबैभन्दा पहिला यो गहन रहस्य सबैलाई बताउनु पर्छ– यहाँ बापदादा सँगसँगै हुनुहुन्छ। यी ब्रह्मा भगवान होइनन्। मनुष्य भगवान हुँदैन। भगवान भनिन्छ निराकारलाई। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ शान्तिधाम निवासी। जहाँ तिमी सबै आत्माहरू रहन्छौ, जसलाई निर्वाणधाम अथवा वानप्रस्थ भनिन्छ फेरि तिमी आत्माहरूले शरीर धारण गरेर यहाँ पार्ट खेल्नुपर्ने हुन्छ। आधाकल्प सुखको पार्ट, आधाकल्प हुन्छ दु:खको। जब दु:खको अन्त्य हुन्छ तब बाबा भन्नुहुन्छ– म आउँछु। ड्रामा यस्तो बनेको छ। ड्रामाको विषयमा बाबाले मुरलीमा धेरै राम्ररी सम्झाउनु भएको छ। त्यो मुरली बच्चाहरूले पढ्नुपर्छ। यहाँ तिमी आउँछौ भट्ठीमा। यहाँ अरू केही पनि बाहिरको कुरा याद आउनु हुँदैन। यहाँ हुनुहुन्छ नै माता-पिता र बच्चाहरू। यहाँ शूद्र सम्प्रदाय छैन। जो ब्राह्मण होइन उसलाई शूद्र भनिन्छ। उनको सँगत त यहाँ हुँदैन। यहाँ हुन्छ नै ब्राह्मणहरूको सँगत। ब्राह्मण बच्चाहरूले जानेका छन्– शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई नर्कबाट स्वर्गको राजधानीको मालिक बनाउन आउनु भएको छ। अहिले हामी मालिक छैनौं किनकि हामी पतित छौं। हामी पावन थियौं फेरि ८४ को चक्कर लगाएर सतो-रजो-तमोमा आयौं। सिँढीमा ८४ को हिसाब लेखिएको छ। बाबा बसेर बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ। जुन बच्चाहरूसँग सबैभन्दा पहिला मिलन गर्नुहुन्छ फेरि उनीहरू नै सबैभन्दा पहिला सत्ययुगमा आउनु छ। तिमीले ८४ जन्म लिएका छौ। रचयिता र रचनाको सारा ज्ञान एक बाबासँग नै छ। उहाँ नै मनुष्य सृष्टिका बीजरूप हुनुहुन्छ। अवश्य पनि बीजमा नै ज्ञान हुन्छ– यस वृक्षको कसरी उत्पति, पालना र विनाश हुन्छ। यो कुरा त बाबाले नै सम्झाउनु हुन्छ। तिमीले अहिले जानेका छौ– हामी अहिले गरिब छौं। जब देवी-देवता थियौं त्यतिबेला कति धनवान थियौं। हीरासँग खेल्थ्यौं। हीराका महलमा रहन्थ्यौं। अहिले बाबाले स्मृति गराउनु हुन्छ– तिमीले कसरी ८४ जन्म लिन्छौ। बोलाउँछन् पनि– हे पतित-पावन, गरिब-निवाज बाबा आउनुहोस्। हामी गरिबलाई फेरि स्वर्गको मालिक बनाउनुहोस्। स्वर्गमा धेरै सुख थियो, अहिले धेरै दु:ख छ। बच्चाहरूले जानेका छन्– यतिबेला सबै पूरा पतित बनेका छन्। अहिले कलियुगको अन्त्य हो फेरि सत्ययुग हुनुपर्छ। पहिला यहाँ एक आदि सनातन देवी-देवता धर्म थियो, अहिले त्यो प्राय: लोप भएको छ र सबैले आफूलाई हिन्दु भन्छन्। यतिबेला क्रिश्चियन धेरै छन् किनकि हिन्दु धर्मकाहरू धेरै परिवर्तन भएका छन्। तिमी देवी-देवताहरूको कर्म वास्तवमा श्रेष्ठ थियो। तिमी पवित्र प्रवृत्ति मार्गका थियौ। अहिले रावण राज्यमा पतित प्रवृत्ति मार्गका बनेका छौ, त्यसैले दु:खी छौ। सत्ययुगलाई भनिन्छ शिवालाय। शिवबाबाले स्थापना गर्नु भएको स्वर्ग। बाबा भन्नुहुन्छ– म आएर तिमी बच्चाहरूलाई शूद्रबाट ब्राह्मण बनाएर तिमीहरूलाई सूर्यवंशी, चन्द्रवंशी राजधानीको वर्सा दिन्छु। यहाँ बापदादा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नबिर्स। शिवबाबाले ब्रह्माद्वारा हामीलाई स्वर्गको लायक बनाइरहनु भएको छ किनकि पतित आत्मा त पावन नबनेसम्म मुक्तिधाममा जान सक्दैन। अहिले बाबाले भन्नुहुन्छ– म आएर तिमीलाई पावन बन्ने मार्ग बताउँछु। मैले तिमीलाई पदमपति स्वर्गको मालिक बनाएर गएको थिएँ, अवश्य तिमीलाई स्मृति आएको छ– म स्वर्गको मालिक थिएँ। त्यतिबेला हामी धेरै कम थियौं। अहिले त कति मनुष्य छन्। सत्ययुगमा ९ लाख हुन्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ– म आएर ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना, शंकरद्वारा विनाश गराइदिन्छु। तयारी सबैले गरिरहेका छन्, कल्प पहिला जस्तै। कति बमहरू बनाउँछन्। ५ हजार वर्ष पहिला पनि यो महाभारत लडाईं भएको थियो। भगवानले आएर राजयोग सिकाएर मनुष्यलाई नरबाट नारायण बनाउनु भएको थियो। त्यसैले अवश्य कलियुगी पुरानो दुनियाँको विनाश हुनुपर्छ। सारा सृष्टिमा आगो लाग्छ। नत्र विनाश कसरी हुन्छ? अचेल बमहरूमा आगो पनि भर्छन्। मूसलधारे वर्षा, भूकम्प आदि सबै हुन्छ अनि मात्र विनाश हुन्छ। पुरानो दुनियाँको विनाश, नयाँ दुनियाँको स्थापना हुन्छ। यो हो संगमयुग। रावण राज्य मुर्दाबाद भएर रामराज्य जिन्दाबाद हुन्छ। नयाँ दुनियाँमा कृष्णको राज्य थियो। लक्ष्मी-नारायणको सट्टा कृष्णको नाम लिन्छन् किनकि कृष्ण सुन्दर छन्, सबैभन्दा प्यारो बच्चा। मनुष्यलाई त थाहै छैन नि। कृष्ण छुट्टै राजधानीको, राधे अलग राजधानीकी थिइन्। भारतवर्ष शिरताज थियो। अहिले कंगाल छ। फेरि बाबा अएर शिरताज बनाउनु हुन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ– अब पवित्र बनेर म एकलाई याद गर्यौ भने तिमी सतोप्रधान बन्छौ। फेरि जसले सेवा गरेर आफू समान बनाउँछ, उसले उच्च पद पाउँछ। डबल शिरताजधारी बन्छ। सत्ययुगमा राजा-रानी र प्रजा सबै पवित्र हुन्छन्। अहिले त छ नै प्रजाको राज्य। दुवै ताज छैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ– जब यस्तो हालत हुन्छ अनि म आउँछु। अहिले तिमी बच्चाहरूलाई राजयोग सिकाइरहेको छु। म नै पतित-पावन हुँ। अब तिमीले मलाई याद गर्यौ भने तिम्रो आत्माबाट फोहर निस्कन्छ। फेरि सतोप्रधान बन्छौ। अहिले श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। सुनमा मिसावट भएपछि कालो हुन्छ त्यसैले अब मिसावट गरेको निकाल्नु छ। बेहदको बाबा भन्नुहुन्छ– तिमी काम चितामा बसेर काला भएका छौ, अब ज्ञान चितामा बस र सबैसँग ममत्व मेटाइदेऊ। तिमी प्रियतमा हौ म एक प्रियतमका। सबै भक्तहरूले भगवानलाई याद गर्छन्। सत्ययुग-त्रेतामा भक्ति हुँदैन। त्यहाँ त हुन्छ ज्ञानको प्रारब्ध। बाबा आएर ज्ञानद्वारा रातलाई दिन बनाउनु हुन्छ। यस्तो होइन शास्त्र पढ्नाले दिन हुन्छ। त्यो हो भक्तिको सामग्री। ज्ञान सागर पतित-पावन एउटै बाबा हुनुहुन्छ, उहाँ आएर सृष्टि चक्रको ज्ञान बच्चाहरूलाई सम्झाउनु हुन्छ र योग सिकाउनु हुन्छ। ईश्वरको साथ योग लगाउनेहरू योग योगेश्वर अनि फेरि बन्छन् राज-राजेश्वर, राज-राजेश्वरी। तिमी ईश्वरद्वारा राजाहरूका राजा बन्छौ। जो पावन राजाहरू थिए, फेरि उनै पतित बन्छन्। आफैं पूज्य फेरि आफैं पूजारी बन्छन्। अब जति हुन सक्छ यादको यात्रामा रहनु पर्छ। जसरी प्रियतमाले प्रियतमलाई याद गर्छन् नि। जसरी कन्याको विवाह पक्का भएपछि एक अर्कालाई याद गर्छन्। अहिले यहाँ जो प्रियतम हुनुहुन्छ, उहाँका धेरै प्रियतमा हुन्छन् भक्ति मार्गमा। सबैले दु:खमा बाबालाई याद गर्छन्– हे भगवान दु:ख हर्नुहोस्, सुख दिनुहोस्। यहाँ त न शान्ति छ, न सुख छ। सत्ययुगमा दुवै हुन्छ।
अहिले तिमीले जानेका छौ– हामी आत्माहरूले कसरी ८४ जन्मको पार्ट खेल्छौं। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बन्छौं। ८४ को सिँढी बुद्धिमा छ नि। अब जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्नु छ तब यसबाट पाप काटिन्छ। कर्म गर्दा पनि बुद्धिमा बाबाको याद रहोस्। बाबाद्वारा हामीले स्वर्गको वर्सा लिइरहेका छौं। बाबा र वर्सालाई याद गर्नु छ। यादद्वारा नै पाप काटिँदै जान्छ। जति याद गर्छौ, त्यति पवित्रताको चमक आउँदै जान्छ। फोहर निस्कँदै जान्छ। बच्चाहरूले जति हुन सक्छ समय निकालेर याद गर्ने उपाय गर्नु छ। सबेरै सबेरै समय मिल्छ। यही पुरुषार्थ गर्नु छ। ठिक छ, गृहस्थ व्यवहारमा बस, बाल-बच्चाहरूको सम्हाल आदि गर तर यो अन्तिम जन्म पवित्र बन। काम चितामा नचढ। अहिले तिमी ज्ञान चितामा बसेका छौ। यो पढाइ धेरै उच्च छ, यसमा सुनको बर्तन चाहिन्छ। बाबालाई याद गर्नाले तिमी सुनको बर्तन बन्छौ। याद गर्न बिर्सिएमा फेरि फलामको बर्तन बन्छौ। बाबाको याद गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्छौ। यो कुरा त धेरै सहज छ। यसमा पवित्रता मुख्य छ। यादद्वारा नै पवित्र बन्छौ र सृष्टि-चक्रको याद गर्नाले स्वर्गको मालिक बन्छौ। तिमीले घरबार छोड्नु पर्दैन। गृहस्थ व्यवहारमा पनि रहनु छ। बाबा भन्नुहुन्छ– ६३ जन्म तिमी पतित दुनियाँमा रह्यौ। अब शिवालय अमरलोकमा जानको लागि तिमी यो एक जन्म पवित्र रह्यौ त के भयो! धेरै कमाई हुन्छ। ५ विकारलाई जितेपछि नै जगतजित बन्छौ। नत्र पद पाउन सक्दैनौ। बाबा भन्नुहुन्छ– मर्नु त सबैलाई पर्छ। यो अन्तिम जन्म हो फेरि तिमीले नयाँ दुनियाँमा गएर राज्य गर्छौ। हीरा-जुहारतका खानीहरू भरिपूर्ण हुन्छन्। त्यहाँ तिमी हीरा-जुहारतसँग खेल्छौ। यस्तो बाबाको बनेर उहाँको मतमा पनि चल्नुपर्छ नि। श्रीमतद्वारा नै तिमी श्रेष्ठ बन्छौ। रावणको मतले तिमी भ्रष्टाचारी बनेका छौ। अहिले बाबाको श्रीमतमा चलेर तमोप्रधानबाट सतोप्रधान बन्नु छ। बाबालाई याद गर्नु छ, बाबाले अरू कुनै मेहनत दिनुहुन्न। भक्ति मार्गमा त तिमीले धेरै धक्का खायौ। अब केवल बाबालाई याद गर र सृष्टिचक्रलाई याद गर। स्वदर्शन चक्रधारी बन्यौ भने तिमी २१ जन्मको लागि चक्रवर्ती राजा बन्छौ। अनेक पटक तिमीले राज्य लियौ अनि गुमायौ। आधाकल्प हुन्छ सुख, आधाकल्प हुन्छ दु:ख। बाबा भन्नुहुन्छ– म कल्प-कल्प संगममा आउँछु। तिमीलाई सुखधामको मालिक बनाउँछु। अहिले तिमीलाई स्मृति आएको छ, हामीले कसरी चक्कर लगाउँछौं। यो चक्र बुद्धिमा राख्नु छ। बाबा हुनुहुन्छ ज्ञानको सागर। तिमी यहाँ बेहदको बाबाको सामुन्ने बसेका छौ। सर्वोच्च भगवानले प्रजापिता ब्रह्माद्वारा तिमीलाई वर्सा दिनुहुन्छ। त्यसैले अब विनाश हुनुभन्दा पहिल्यै बाबालाई याद गर, पवित्र बन। अच्छा!
१) निरन्तर बाबाको यादमा रहनको लागि बुद्धिलाई सुनको बर्तन बनाउनु छ। कर्म गर्दा पनि बाबाको याद रहोस्, यादद्वारा नै पवित्रताको चमक आउँछ।
२) मुरली कहिल्यै छुटाउनु हुँदैन। ड्रामाको रहस्यलाई यथार्थ रीतिले बुझ्नु छ। भट्ठीमा बाहिरको केही पनि याद नआओस्।
स्वयंमा बापदादालाई बलिहार गराउने त्यागमूर्त , निश्चयबुद्धि भव
“बाबा पाएँ, सबैथोक पाएँ”– यस खुसी वा नशामा सबै कुरा त्याग गर्ने ज्ञान स्वरूप, निश्चयबुद्धि हुनेले बाबाबाट जब खुसी, शान्ति, शक्ति वा सुखको अनुभूति गर्छन् अनि लोकलाजको पनि पर्बाह नगरी, सदा कदम अगाडि बढाइरहन्छन्। उनीहरूलाई दुनियाँको सबै कुरा तुच्छ, निस्सार अनुभव हुन्छ। यस्ता त्यागमूर्त, निश्चयबुद्धि भएका बच्चाहरू प्रति बापदादा आफ्नो सबै सम्पत्ति सहित बलिहार जानुहुन्छ। जसरी बच्चाहरूले संकल्प गर्छन्– बाबा म हजुरको हुँ, त्यस्तै बाबाले पनि भन्नुहुन्छ जो बाबाको त्यो तिम्रो।
सहजयोगी ऊ हो, जसले आफ्ना सबै संकल्प वा कर्मद्वारा बाबाको स्नेहको प्रकम्पन फैलाउँछ।